Singapaoro GovCamp 2011 · Global Voices teny Malagasy
Singapaoro GovCamp 2011
Voadika ny 24 Mey 2017 5:07 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Svenska, English
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Novambra 2011)
Andro vitsy talohan'ny 25 Nov 2011 no natao ny GovCamp andiany faharoa tamin'iny taona iny tao Singapaoro, teo ambanin'ny lohahevitra hoe “Mampifandray ny Olona, ny Angondrakitra ary ny Hevitra”.
Ny GovCamp Singapore dia mifantoka amin'ny fametrahana ny governemanta ho sehatra iray hampandraisana anjara ireo sehatra fanalahidin'ny firenena ho tonga miaraka anaty velakevitra iray ary hiaraka hitrandraka izay fomba hanatsaràna ny fandraisan'andraikitry ny olompirenena sy ireo tolotra amin'ny fampiasàna ny teknolojia vaovao. Miaraka amin'ny fihamaroan'ireo ankizy teraka anaty tontolo dizitaly, misy fitomboana be ny zavatra andrasan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny, ary misy fomba fihetsika vaovao miforona eny anivon'ny asam-panjakana, mba hamaliana haingana sy amin'ny fomba mahomby ny ahiahin'ny olompirenena.
Taorian'ny dinika an-databatra boribory niaingàna, nisy ireo atrikasa natao momba ireo lohahevitra notrandrahana teny ifotony sy nofidian'ireo olona nandray anjara. Fintinin'i Calvin ireo tatitra tety anaty aterineto momba ilay hetsika. Tamin'ny fampiasàna ny tenifototra #govcampsg, ireto ambany ireto ny sasany amin'ireo fomba fijerin'ireo mpanatrika
@kixes: Prof Lall: Tsy azonareo tombanana ho tsy misy dikany avokoa ireo fanehoankevitra ho hitanareo amin'ireo fanehoankevitra anaty aterineto. Oh. i Islandy izao nitrandraka ny lalàm-panorenany avy eny ifotony.
@lucian: ho anareo masoivohon'ny Gov, aza araraotina ny olompirenena, amin'ny fitadiavana domberina nefa tsy te-hanome valiny akory.
@nanyate: Tsy resaka fitaovana fotsiny ny media sosialy. Resaka saina koa io – fanànana fifampiresahana misokatra, tsy mihatsara ivelan-tsihy eo amin'ny gov sy ny vhk. Vonona ho amin'io ve ny gov?
@broadbandjohn: resaka an-databatra: tokony tsy ho resaka fifaninanana hatsaran-tarehy fotsiny ny media sosialy, fa mba fifanakalozankevitra mahasoa kokoa.– fotoana iray lafatra sy fanararaotra izany
@sharonite: mila isika “fahaiza-mitarika misokatra” ao anatin'ny Angondrakitra Misokatra, ao anatin'ny saina & kolontsain'ireo Mpitarika ity firenena ity izany rehetra izany.
@kazitoshi: Endrika ivelany mahafinaritra sy ny rehetra mihitsy ny media sosialy, saingy raha ireo rafitra no tsy mahomby/kinga, dia tsy ho hainao ny hitantana.
@calvin_s: Tokony HALAKY ny governemanta. Marindrano kokoa; Kinga; mifintimpintina; maharaka teknolojia
@sianjon: #GovCampSG Society 2.0 toa manomboka maneno sahala amin'ny hoe “Kaonferansa Inona no Nitranga Tamin'ny TSY ao anatin'ny fiantsoana hoe TSY-kaonferansa?
Mpandray anjara iray nankamamy ireo fifanakalozankevitra tao amin'ny GovCamp i nickpan.com.
Nanome hevitra 2 ho ahy iny fivoriana iny:
Maninona moa no tsy manana tranonkala iray hahafahan'ireo mpampiasa fitateram-bahoaka milaza an-tsitrapo ny fahazàrany rehefa mifindra fiara fitaterana. Aiza izy ireo no mipetraka, fotoana inona no mifamoivoy, avy aiza no mankaiza, inona no ampiasain-dry zareo. Raha misy betsabetsaka ihany ny santionany azo, io angondrakitra nangonina teny anivon'ny daholobe io ve afaka hanampy ireo manampahefana handrafitra fitaterambahoaka tsaratsara kokoa?
Marihan'ireo mpanoratra rindrambaiko ao an-toerana nanatrika ny GovCamp fa tsy dia azo iasàna araka ny tokony ho izy ireo angondrakitra ao amin'ny data.gov.sg, araka izany dia tsy misy azo ampiasaina na hananganan-javatra. Kanefa, izaho mihevitra hoe nahoana no i Singapaoro ihany no saintsainina? Nahoana no tsy mampiasa ireo angondrakitra avy any ivelany mba hamoronana hevitra momba ny fampiasa ary aseho fotsiny amin-dry zareo manampahefana mahefa eto an-toerana sy tenenina amin-dry zareo raha azo raisina aminà endrika iray manokana ilay angondrakitra, avy eo ilay fampiasa dia afaka ampiasaina avy hatrany eto Singapaoro koa.
Fa ny vinavina mazava loatra dia mba ho tsara ilay fampiasa.
Amin'ny ankapobeny dia nahafinaritra ahy ity GovCampSG ity ary antenaiko fa hihatsaratsara kokoa amin'ny taona 2012, miaraka aminà atrikasa sy fifanakalozana hevitra mahasoa maromaro kokoa.
Roan Yong, iray nandray fitenenana dia niresaka momba ny “gamification” sy ny fiarahana miasa.
Teny iray ampiasaina betsaka eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny asam-panjakana ny hoe Fiarahana miasa. Saingy io koa no teny tena be indrindra no tsy mahatakatra ny dikany. Marobe ny olona no mihevitra fa tokony handeha ho azy ny fiarahana miasa. Tombanan-dry zareo ho toy ny fiasan'ny majika ny fiarahana miasa. Ary ny angondrakitra misokatra, ho toy ny fikasàna ifampizaràna, ary ireo hevitra mitovitovy dia miasa toy ny taharo majika ho an'ny fiarahana miasa.
Ao anatin'ny resako, tanjoko ny hizara ny eritreritro momba ny antony tsy mampahomby ny fiarahana miasa sy ny azontsika atao mba hampahomby ny fiarahana miasa. Ny ‘gamification’ no atolotro ho toy ny vahaolana iray goavana amin'ireo olan'ny fiarahana miasa.
Kirsten Han dia mpikatroka iray nandrindra atrikasa iray.
Matetika ry zareo Singapoerana no toa tsy manankery sy tsy mahita aleha, toy ny hoe tsy misy na inona na inona azon'izy ireo atao intsony mba hanovàna ireo zavatra tsy mahafaly azy. Omaly izahay nifanakalo hevitra momba io sy zavatra maro tao amin'ilay atrikasa, nandalo tamin'ireo olan'ny fanivànan-tena, ny fanivànana ataon'ny namana, ny tahotra (na farafaharatsiny ny fahitàna hoe misy zavatra atahorana) ary raha tena an-dalam-piovàna tokoa ny fiarahamonina.
Raha toa tapaka ny hevitra fa hanatevina laharana ny fiarahamonina sivily ao Singapaoro, na te-ho lasa mpikatroka/mpirotsaka an-tsitrapo, azo eritreretina ny hifampitaritarihanao amin'ireo olona ireo any am-parany any , ary mandritry ny fotoana ela.
Nahafinaritra ihany koa ny nahafahana nihaona tamin'ireo olona izay tsy nahafantatra velively, saingy nanao ezaka mba hahafantatra ny atao hoe fiarahamonina sivily ary ireo olana Singaporeana tsy dia be mpahafantatra tany aloha tany.